युगसम्बाद साप्ताहिक - दरबार हत्याकाण्ड कहिलेसम्म रहस्यमै ?
Tuesday, 12.18.2018, 10:21pm (GMT+5.5) Home Contact
Thursday, 06.15.2017, 12:54pm (GMT+5.5)
काठमाडौं । २४० वर्षको राजतन्त्रको इतिहासमा जनतामाझ अति लोकप्रिय राजाहरु निस्किए । जसमध्येमा पर्दछन स्व. वीरेन्द्र । मृदुभाषी र उदार छविका राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश हुने गरी भएको दरबार हत्याकाण्ड जेठ १९ गते १६ वर्ष पुग्यो । २०५८ जेठ १९ गतेको त्यो हत्याकाण्ड नेपालको राजनीतिका लागि अहिलेको अवस्था ल्याउने सूत्राधार त बन्यो तर, मुलुक बाह्य हस्तक्षेपको शिकार भयो ।
नेपालमा शाहंवशीय राजतन्त्रको इतिहास एक हजार वर्षभन्दा बढीको छ । आधुनिक नेपाल अर्थात पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेपछि विशाल नेपालको राज्य संचालन गरेको शाहवंशीय राजाहरुको इतिहास भने साढे दुई शताब्दी जतिको मात्र छ । यो साढे दुई सय वर्षमा १०४ वर्ष त राणाहरुले नै राज गरे ।
विदेशीको गुलाम भएर बस्नुभन्दा आफ्नै जनतालाई अधिकार दिएर चुपचाप बस्नु जाति भन्दै प्रजातन्त्र दिएका स्व. राजा वीरेन्द्र नेपाली जनतामाझ अत्यन्त लोकप्रिय थिए । त्यसैले अहिले पनि कुनै न कुनै सन्दर्भमा दरबार हत्याकाण्डको सम्झना आमरुपमा हुने गर्दछ । दरबार हत्याकाण्ड कसले रच्यो ? यसको उद्देश्य के थियो । धेरैको आआफ्नै तर्क छ । तर्क आआफ्नो आस्था अनुसार छ । वस्तुनिष्ठ तर्क वा विश्लेषण कसैको पनि छैन । राज्यले पनि यो घटनाको सत्यतत्थ पत्ता लगाउनुपर्ने दायित्व सम्झेको छैन ।
जसरी मदन भण्डारीको हत्या रहस्यको पोकोभित्र बन्द गरियो दरबार हत्याकाण्ड पनि त्यस्तै रहस्यकै पोकोभित्र राखिएको छ । जुन पोको चाहिएका बेला खोलेर त्यसबाट अरुलाई तर्साउने, धम्क्याउने गर्न सकियोस् ।
उदार छविका राजा वीरेन्द्रको सबैसंग मिल्ने स्वाभाव भए पनि राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा दृढ थिए । भारतीय प्रभुत्ववादविरुद्ध प्रशंसायोग्य अडान लिएका कारण नेपाली जनताले गर्वका साथ लिने गरे । तर, भारतीय संस्थापन पक्षलाई सन्तुलित बनाउने कूटनीतिक क्षमता भने देखाउन सकेनन् । तापनि राष्ट्रियताप्रतिको वीरेन्द्रको अडान इतिहासले सधैं सम्झनेछ ।
राजतन्त्रकालसम्म चीन नेपालको अत्यन्त निकट र नेपाल चीनको सबभन्दा भरपर्दो मित्र थियो । मुलुकमा गणतन्त्र आएसंगै चीन पछिपर्यो भने हरेक निर्णयमा भारत हावी हुँदै आएको छ । अहिले पनि भारतकै सुझाव अनुसार काम भैरहेका छन् । मधेशवादीका माग पूरा गरेर निर्वाचन गराउन अप्रत्यक्ष अनेक दवाव छ । अहिलेका नेताहरु भारतको कथित परामर्श लत्याउने हैसियतमा छैनन् ।
तर राजा वीरेन्द्रले भारतीय आक्रामकताको सामना गरेर नेपाललाई पटकपटक जागाएका छन् । वीरेन्द्र राजा बन्नेबित्तिकै महेन्द्रकालमा संरक्षण पाएका तिब्बती खम्पाहरू विरुद्ध सैन्य कारबाही गरे, जसबाट भारत–अमेरिका दुवै चिढिए । राजपरिवार र भारतको सत्तारुढ गान्धी परिवारबीच कहिल्यै विश्वासको सम्बन्ध रहेन ।
नारायणहिटी राजदुबार र नयाँ दिल्लीबीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धकाबीच तत्कालीन सरकारले २०४५ सालमा चीनबाट विमानभेदी अस्त्रहरू ल्याएपछि भारतले नाकाबन्दी नै लगाइदियो । यो नाकाबन्दी पञ्चायत विरोधी जनआन्दोलनको जग बन्यो र भारतले समर्थन र्गयो । आन्दोलन मत्थर बनाउन दरबारलाई भुटानको हैसितमा रहने शर्तसहितको सम्झौताको मस्यौदा पठायो । त्यसमा हस्ताक्षर गरेको भए नेपाल भुटानको हैसियतमा पुग्थ्यो र आजसम्म राजतन्त्रको निरन्तरता हुनसक्थ्यो । तर, राजा वीरेन्द्रले त्यो काम गरेनन् ।
नेपाललाई भारतको अघोषित उपनिवेशष बन्नबाट राजा वीरेन्द्रले जोगाए, जनआन्दोलनको भावनाअनुरूप राष्ट्रिय शक्तिहरूसँगै सम्झौता गरेर बहुदलीय प्रजातन्त्रको घोषणा गरे ।
यी र यस्ता काम र अडानहरुका कारण राजा वीरेन्द्र नेपालीको मानसपटलमा सधैं चिरस्मरणीय रहेका छन् । तर प्रश्न यी राजाको परिवारकै वंश विनाश गर्ने को हो ? के छानबिन समितिले भनेजस्तै तत्कालीन दीपेन्द्रले नशाको सुरमा त्यो हत्याकाण्ड मच्चाएका थिए वा बाहिरी शक्तिको हात थियो ? यो रहस्य कुनै न कुनै दिन अवश्य सार्वजनिक होला ?
२०५८ जेठ १९ शुक्रबारका दिन पारिवारिक भोज चलिरहेका बेला तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुनेगरी राजपरिवारका १० जनाको हत्या भएको थियो । हत्यामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, अधिराजकुमार निराजन, अधिराजकुमारीहरू श्रुति, शान्ति राज्यलक्ष्मी सिंह, शारदा राज्यलक्ष्मी शाह, शाहज्यादी जयन्ती राज्यलक्ष्मी शाह, कुमार खड्गविक्रम शाह र धीरेन्द्र शाहको हत्या भएको थियो ।
घटनामा कोमल शाह, शोभा शाही, कुमार गोरखशमशेर र केतकी चेस्टर घाइते भएका थिए । यो घटनाको छानबिनन समितिले सबैको हत्या गरिसकेपछि तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रले आत्महत्या गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो र हत्याको कारण
कारण दीपेन्द्र र देवियानी राणाबीचको प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्न राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यको असहमति रहेको बताइन्छ । यो घटना जति रहस्यमय छ यसभित्र अनेक षड्यन्त्र लुकेको आशंका अहिले पनि कायमै छ । जवसम्म हत्याकाण्डको यथार्थ विवरण सार्वजनिक हुँदैनन तबसम्म यस्ता आशंका र तर्कहरु चलिनै रहनेछन् ।
भरतपुरमा के हुँदैछ ? मध्यरातमा मतपत्र च्यातियो (05.31.2017)
मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध रिट (05.24.2017)
निर्वाचनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्रीको आग्रह (05.24.2017)
विश्व शान्तिका लागि बुद्धको उपदेश महत्वपूर्ण (05.17.2017)
शेरचनको शव काठमाडौंमा (05.11.2017)
दलहरू तालमेलमा ओर्लिए (05.11.2017)
गोरखामा दाहाल–भट्टराई पक्षको झडप (05.11.2017)
आर्थिक समृद्धि प्रमुख दलका घोषणापत्रको सार (05.11.2017)
महाअभियोग प्रस्ताव अस्वाभाविक (05.02.2017)
राष्ट्रपति विद्या भण्डारी नयाँदिल्लीमा (04.18.2017)
मधेसवादी दलले जनता अल्मल्याए (04.11.2017)
अब हुलाकले चिठीसंगै पैसा पनि पु¥याउने (04.11.2017)
दुई सय ३१ भन्दा बढी नेपाली युवा विदेशी जेलमा छन् (03.22.2017)
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण विश्वास बढाउने अवसर : परराष्ट्रविद् (03.22.2017)
निर्वाचनको अभियानमा जुटन आयोगको आव्हान (03.22.2017)
काभ्रेको भुम्लुटारका भूकम्प पीडितको बिचल्ली (02.15.2017)
देशलाई स्थिरता दिनतर्फ कुनै दलको ध्यान गएन पूर्वराष्ट्रपति डा यादव (02.15.2017)
माइतीघर मण्डलाको शोभामा थपियो राष्ट्रिय झण्डा (01.31.2017)
प्रा.डा. सुवेदीलाई बेलायती महारानीद्वारा विशेष पदवी (01.18.2017)
वरिष्ठ पत्रकार मणिराज उपाध्यायको निधन (01.18.2017)
कूटनीतिक क्षमता भए नेपाली विमान युरोप उड्थे
मानिसलाई पशु बनाउने खेल - यादब देवकोटा
जनताको विश्वासमाथि तुषारापात
राष्ट्रका लागि जसले बलिदान गरेको छ, राष्ट्रियताको मुद्दामा अर्कोले पछि पा¥यो - नवीन्द्रराज जोशी
नेपालमा अग्र्यानिक बुद्धिजीवीको खाँचो ! - महेश्वर शर्मा
‘मिसनरीकरण मिसन’को इतिवृत्तान्त - तारा सुवेदी
भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने पुनः प्रतिबद्धता
रक्षामन्त्रीको उद्घोष– निर्मलाको हत्यारा छिट्टै सार्वजनिक गछौैं
यिनीहरुलाई न चिसोले न फोहरको घीनलाग्छ ...
चारजनाको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन